UMGAQO-NKQUBO WABUCALA | astroshopee.com - Okunye
Eyona Okunye UMTHETHO WABUCALA
Umgaqo-nkqubo wabucala (Ngaphandle kwe-EU)
Umgaqo-nkqubo weKuki (Ngaphandle kwe-EU)
Isaziso sangasese kubahlali baseCalifornia
Umgaqo wabucala wabasebenzisi be-EU
Umgaqo-nkqubo weKuki wabasebenzisi be-EU
Umhla wokusebenza: Ngomhla we-25 kuMeyi 2018
Iastroshopee Digital Media, LLC d / b / iastroshopee Industries, abaxhasi bayo kunye neenkxaso (i 'Iastroshopee' , 'thina' okanye 'thina' ) ixabisa ubumfihlo babasebenzisi bethu kunye nababhalisi. Sizama ukungafihli malunga nendlela esiqokelela kwaye sisebenzise ngayo ulwazi lwakho, ukugcina ulwazi lwakho lukhuselekile kwaye sikunike ukhetho olunokuba luncedo. Lo Mgaqo-nkqubo Wabucala ( 'Umgaqo-nkqubo' ) ichaza iinkqubo zabucala ze www.astroshopee.com iwebhusayithi (ifayile ye- 'Indawo' ), ezizezabanini neziqhutywa yiastroshopee. Lo mgaqo-nkqubo wenzelwe ukukunceda uqonde ukuba loluphi ulwazi oluqokelelwa nguastroshopee, kutheni le nto siqokelela kwaye senza ntoni ngayo.
Lo Mgaqo-nkqubo usebenza kwiinkcukacha zethu ezikwi-Intanethi zeSayithi ngokubhekisele kubo bonke abasebenzisi ngaphandle kwabasebenzisi abakwiManyano yaseYurophu. Lo Mgaqo-nkqubo awusebenzi kwidatha yobuqu eqokelelwe nakweyiphi na iwebhusayithi yomntu wesithathu okanye ii -apps, kubandakanya iwebhusayithi onokufikelela kuyo kwiSiza. Ezo webhusayithi kunye neeapps zinokuba nemigaqo-nkqubo yazo yabucala, esikukhuthaza ukuba uyifunde ngaphambi kokubonelela ngalo naluphi na ulwazi lomntu okanye ngalo. Iminikelo ethile kwiSayithi yethu, inokuba nezaziso ezongezelelweyo malunga nolwazi kunye nokukhetha. Nceda ufunde ezongezelelweyo izifihlo zabucala ukuze uqonde ukuba zinokusebenza njani kuwe.
Nceda ufunde lo Mgaqo-nkqubo ngononophelo ukuze uqonde imigaqo-nkqubo yethu kunye nezinto esizenzayo malunga nolwazi lwakho kunye nendlela esiza kuyiphatha ngayo. Ukuba awuvumelani nemigaqo-nkqubo kunye nezenzo zethu, musa ukusebenzisa iSiza. Ngokusebenzisa iSiza, uyavuma lo Mgaqo-nkqubo. Le Polisi inokutshintsha amaxesha ngamaxesha. Ukuqhubeka kokusebenzisa iSiza emva kokwenza iinguqu kuthathwa njengokukwamkela olo tshintsho, ke nceda ujonge umgaqo-nkqubo rhoqo ngamaxesha uhlaziyo.
ABANTWANA Bangaphantsi kweminyaka eli-13
Indawo ayenzelwanga abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-13 ubudala, kwaye asiqokeleli sazi ulwazi oluvela kubantwana abangaphantsi kweminyaka eli-13. Ukuba sifumanisa ukuba siqokelele okanye safumana ulwazi lomntu siqu kumntwana ongaphantsi kweminyaka eli-13 ngaphandle kokuqinisekiswa kwemvume yabazali, siya kucima olo lwazi. Ukuba uyakholelwa ukuba singanalo naluphi na ulwazi malunga okanye malunga nomntwana ongaphantsi kwe-13, nceda unxibelelane nathi apha imfihlo@astroshopee.org .
IINKCUKACHA SIYAQOKELELA NOKUBA SIQOKELELA NJANI
Singaqokelela ulwazi malunga nawe xa unxibelelana kwaye usebenzisa iSiza. Olu lwazi lunokubandakanya ulwazi lomntu (umz. Igama, idilesi ye-imeyile, idilesi yeposi, inombolo yomnxeba kunye nazo naziphi na ezinye iinkcukacha zonxibelelwano), ulwazi lobuchwephesha (umzekelo idilesi ye-IP, uhlobo lwesikhangeli, isazisi sedivayisi) kunye nolwazi lokusebenzisa (umzekelo, iphepha lewebhu olindwendwelayo, iintengiso ozicofileyo. Kwi). Singazidibanisa ezi ntlobo zolwazi kunye, kwaye ngokudibeneyo sibhekisa kulo lonke olu lwazi kule Mgaqo-nkqubo wabucala njenge 'Ulwazi' . Ulwazi lungaqokelelwa njengoko kuchaziwe apha ngezantsi kwaye kusetyenziswa ii-cookies, ii-web beacons, iipikseli, kunye nobunye ubuchwephesha obufanayo kuthi okanye ngezinye iinkampani endaweni yethu. Apha ngezantsi luhlobo lolwazi esinokuluqokelela:
Iinkcukacha osinike zona.
xa ubhalisa okanye usebenzisa le ndawo, okanye ubhalisa kuyo nayiphi na inkonzo kwiSayithi, sinokukucela ukuba unikezele ngolwazi lomntu onokuchongwa ngalo, njengegama, idilesi yeposi, idilesi ye-imeyile, inombolo yomnxeba, okanye nayiphi na ezinye iinkcukacha zonxibelelwano.
xa usebenzisa iSiza ukunxibelelana nabanye okanye ukuthumela, ukulayisha, ukubonisa okanye ukugcina nasiphi na isiqulatho esifana nezimvo, iifoto, iividiyo, ii-imeyile, iziqhoboshelo, ukufakelwa kwelizwi, kunye nezinye iziqulatho ezenziwe nguwe (ngokudibeneyo, 'Igalelo loMsebenzisi') esidlangalaleni imimandla yeSiza. Umrhumo wakho woMsebenzisi unokudluliselwa kwabanye kwaye asinakukwazi ukulawula iintshukumo zabanye abantu onokuthi ukhethe ukwabelana nabo ngeGalelo lakho loMsebenzisi. Kananjalo asinakuthintela ukuqhubekeka nokusetyenziswa kolu Lwazi sakuba senziwe esidlangalaleni.
Singakucela ukuba ubonelele ngolwazi xa ungena kumncintiswano okanye i-sweepstakes exhaswe sithi okanye uphendule kuvavanyo esinokuthi siluthumele kwaye sicele ukugcwalisa kwiSiza.
xa unxibelelana nathi ukuxela ingxaki ngeSiza, okanye nayiphi na eminye imibuzo ngokubanzi. Singagcina iirekhodi kunye neekopi zembalelwano yakho (kubandakanya iidilesi ze-imeyile, iinombolo zefowuni, kunye nolunye ulwazi lomntu osinike lona).
xa ubhalisela nayiphi na inkonzo ehlawulwayo okanye ubeka nayiphi na iodolo kwiSiza, sinokugcina iinkcukacha zentengiselwano oyenzayo kwiSayithi kunye nokuzalisekiswa kwayo nayiphi na iodolo (Qaphela ukuba unokucelwa ukuba ubonelele ngolwazi lwezezimali ngaphambi kokufaka iodolo ngeSiza).
xa kungenjalo usebenzisa iSiza, njengokukhangela imibuzo, ukujonga imbali, ukujonga iphepha, ukujonga umxholo esiwenzayo ukuba ufumaneke, okanye ukufaka nayiphi na iplagi yethu.
Ulwazi lobuchwephesha, ukusetyenziswa, kunye nohlalutyo.
Sinokuqokelela ulwazi oluthile lobuchwephesha kunye nokusetyenziswa xa usebenzisa indawo yethu, enje ngohlobo lwesixhobo, isikhangeli, kunye nenkqubo oyisebenzisayo, isazisi esikhethekileyo sedivayisi, idilesi ye-IP, isixhobo kunye noseto lwebrawuza, iphepha lewebhu olindwendwelayo, kubandakanya ulwazi malunga indlela onxibelelana ngayo neSayithi lethu kunye neqela lethu lesithathu kunye nolwazi olusivumela ukuba siqaphele kwaye sidibanise umsebenzi wakho kwizixhobo nakwiSayithi. Singasazi isixhobo sakho ukuba sikunike amava abhalwe wena kunye nentengiso kwizixhobo ozisebenzisayo. Bona eyethu Umgaqo-nkqubo weKuki icandelo lolwazi oluthe kratya malunga nendlela esinokubusebenzisa ngayo obu buchwephesha ukuqokelela olu lwazi.
Unokwazi ukufikelela kumanqaku eSayithi ngokuhlala noluntu lwesithathu, iiforamu, kunye neendawo zosasazo zasekuhlaleni, iinkonzo, ii-plug-ins, kunye nokusetyenziswa (iiSayithi zeMidiya yezeNtlalontle). Useto lwakho lwangasese kwiiSayithi zeMidiya yokuSasaza, kunye nemigaqo-nkqubo yabo yabucala, iya kugqiba ulwazi lomntu kunye nolunye olunokwabelana nathi, okanye olufunyenwe sithi ngobuchwephesha bokulandela umkhondo kwimidiya yoluntu, xa ungena kwiSayithi, kwaye unokuba eqokelelwe kwaye isetyenziswe zezi Sayithi zeMithombo yeendaba. Apho kuvunyelwe ngumthetho, ngokubonelela ngolu Lwazi okanye ngenye indlela ukunxibelelana neeSayithi zethu ngeeSayithi zeMidiya yezeNtlalontle, uyavuma ekusebenziseni kwethu uLwazi oluvela kwiSayithi yezeMithombo yeendaba ngokuhambelana nalo Mgaqo-nkqubo wabucala.
Ulwazi lwendawo. Siqokelela ulwazi lwexesha lokwenyani malunga nendawo okuyo, njengelizwe lakho, xa uyinika okanye usebenzisa ulwazi ngesixhobo (njengedilesi ye-IP), okanye indawo ekuyo isixhobo sakho xa ungena kwiSiza ngesixhobo esiphathwayo.
SISEBENZISA NJANI IINKCUKACHA ZAKHO
Sisebenzisa ulwazi esiluqokelela malunga nawe okanye osinike lona ngeenjongo ezichazwe kulo mgaqo-nkqubo okanye ezichazwe ngexesha lokuqokelela okanye ngemvume yakho, kubandakanya ezi njongo zilandelayo:
Ukubonelela okanye ukuhlalutya ukusebenzisa kwakho iSiza kunye nemixholo yaso, iimveliso, iinkqubo kunye neenkonzo.
Gcwalisa izicelo zakho kunye nayiphi na enye injongo oyinike yona, kubandakanya ukunxibelelana nawe malunga nokuthengile okanye ukuthengiselana.
Ndikunike izaziso malunga neakhawunti yakho okanye umrhumo.
Thumela ulwazi malunga nokwazisa, umnikelo kunye neempawu zesiza.
Yazisa xa uphumelela enye yemincintiswano yethu okanye i-sweepstakes.
Yazisa xa uhlaziyo lweSayithi lufumaneka, kunye notshintsho kuyo nayiphi na imveliso okanye iinkonzo esizibonelelayo okanye esizibonelelayo.
Ukubonelela, ukuphuhlisa, ukugcina, ukwenza umntu, ukukhusela, kunye nokuphucula amava akho kunye neminikelo yethu kwiSiza.
Qikelela ubungakanani babaphulaphuli kunye neepatheni zokusetyenziswa.
Gcina ulwazi malunga nezinto ozikhethayo, esivumela ukuba senze ngokwezifiso iSayithi lethu ngokweminqweno yakho.
Khawulezisa uphando lwakho.
Khusela ngokuchasene, uchonge, kwaye uthintele ubuqhetseba kunye neminye imisebenzi engekho mthethweni
Yazi xa usebenzisa iSiza.
Nikezela, uthengise, kwaye ubhengeze iimveliso, iinkqubo, kunye neenkonzo ezivela kuthi nakwimibutho yethu, amaqabane oshishino, kwaye ukhethe umntu wesithathu onokuba nomdla kuwe. Sinokusebenzisa ulwazi oluqokelelweyo ukubonisa iintengiso kubaphulaphuli bethu ekujoliswe kubo.
Phumeza uxanduva lwethu kwaye unyanzelise amalungelo ethu avela kuzo naziphi na iikhontrakthi ezenziwe phakathi kwakho nathi, kubandakanya nokwenza amatyala kunye nokuqokelela.
Fumanisa, uphande, kwaye uthintele imisebenzi kwiSayithi yethu enokwaphula imigaqo yethu, inokuba yeyobuqhetseba, iphule ilungelo lokushicilela, okanye eminye imigaqo okanye enokuthi ibe yenye into engekho mthethweni, ukuthobela iimfuno zomthetho, nokukhusela amalungelo ethu namalungelo kunye nokhuseleko abasebenzisi bethu nabanye.
INDLELA ESABELANA NGAYO SIZAZISELA INGCACISO YAKHO
Singabelana kwaye sichaze ulwazi oluhlanganisiweyo noluchongiweyo malunga nabasebenzisi bethu ngaphandle kwesithintelo. Ukongeza, sinokwabelana kwaye siveze uLwazi esiluqokelelayo, okanye ubonelele ngezi ndlela zilandelayo okanye ngayo nayiphi na enye injongo evezwe ngexesha lokuqokelela:
Ngemvume yakho. Singaziveza iiNkcukacha zakho xa usinika imvume yakho yokwenza njalo.
Ababoneleli ngeenkonzo. Iikontraki zethu, ababoneleli beenkonzo, abanikezeli bemixholo, kunye nabanye abantu besithathu esisebenzisayo ukuxhasa ishishini lethu banokufikelela kulwazi ukunceda ukwenza iinkonzo abasenzela zona, ezinje ngokubandakanya: ukudala, ukugcina, ukusingatha, kunye nokuzisa Indawo yethu, iimveliso kunye neenkonzo; ukuqhuba ukuthengisa, ukuphatha iintlawulo, i-imeyile kunye nokuzalisekiswa komyalelo; ukulawula imincintiswano; ukuqhuba uphando kunye nohlalutyo; kunye nenkonzo yabathengi.
Ubunini obutsha. Kumthengi okanye omnye umntu oza kungena ezihlangwini zakhe kwimeko yokudityaniswa, ukwahlulwa phakathi, ukulungiswa ngokutsha, ulungelelwaniso ngokutsha, ukuyekiswa okanye okunye ukuthengiswa okanye ukuhanjiswa kwezinye okanye zonke iiasethi zethu, nokuba kukungxamela okuqhubekayo okanye njengenxalenye yokuqothuka, ukupheliswa okanye inkqubo efanayo, loluphi ulwazi olugcinwe kuthi malunga neSayithi lethu kunye nabasebenzisi luphakathi kweeasethi ezihanjisiweyo.
uthini umqondiso kaSeptemba 26
IiSayithi eziDibeneyo. Indawo inokuqulatha amakhonkco kwezinye iisayithi, kubandakanya iiSayithi zeMidiya yezeNtlalo. Singadibanisa iinkqubo zesicelo seendaba zosasazo okanye iiplagi ('iiPlag-ins') ezivela kuthungelwano lwentlalo, kubandakanya i-Facebook, i-Twitter, i-Instagram, iTumblr, iPinterest nabanye, kwiSayithi yethu. Ii-plug-ins zingadlulisela ulwazi malunga nawe kwiPlatform yeqonga ngaphandle kwentshukumo yakho. Olu lwazi lunokubandakanya inombolo yakho yesazisi somsebenzisi weqonga, yeyiphi iwebhusayithi ekuyo, kunye nokunye. Ukusebenzisana ne-Plug-in kuya kugqithisa ulwazi ngqo kwi-Plug-in yenethiwekhi yentlalo kwaye olo lwazi lunokubonakala ngabanye kwiqonga. Ii-plug-ins zilawulwa ngumgaqo-nkqubo wabucala weqonga, hayi ngoMgaqo-nkqubo wethu.
Amaqabane kunye nabaNxulumene. Singabhengeza uLwazi kumahlakani, amaqabane oshishino, kunye nabantu besithathu (umzekelo, abathengisi, abathengisi, iiarhente zentengiso, uthungelwano lwentengiso kunye namaqonga, imibutho yophando, kunye nezinye iinkampani) ezinokwenza kwazo kungagutyungelwanga Ngalo Mgaqo-nkqubo wabucala, kwaye oko kunokunika, ukunikela, ukuphucula, ukuthengisa, kunye nokunye ukunxibelelana nawe malunga neemveliso zabo kunye neenkonzo. Ukufunda ngakumbi malunga nokhetho lwakho, nceda ubone ukhetho lwakho ngezantsi. Sisenokwabelana ngolwazi oluthile nomntu wesithathu ukubonelela ngentengiso kuwe ngokusekwe kwimidla yakho. Ngolwazi oluthe kratya, nceda ubone Ukhetho lweNtengiso apha ngezantsi.
Abaxhasi kunye nokunyuselwa kunye. Ngamanye amaxesha sinika umxholo okanye iinkqubo (umzekelo, ukhuphiswano, i-sweepstakes, ukukhushulwa, okanye ukudityaniswa kweSayithi yezeMidiya yezeNtlalontle) ezixhaswe okanye zidityaniswe ngabantu besithathu. Ngenxa yobu budlelwane, abantu besithathu baqokelela okanye bafumane ulwazi kuwe xa uthatha inxaxheba kulo msebenzi. Asinakulawula ukusetyenziswa kwale nkampani yesithathu kolu Lwazi. Siyakukhuthaza ukuba ujonge ukubhengezwa ngasese kwalo naliphi na iqela lesithathu ukuze ufunde malunga nokwenza kwabo idatha ngaphambi kokuba uthathe inxaxheba kulo msebenzi.
Iinjongo zoMthetho noNyanzeliso loMthetho. Singabhengeza uLwazi ngokuphendula kwinkqubo yezomthetho, umzekelo ekuphenduleni kumyalelo wenkundla okanye kwisupina, okanye ekuphenduleni kwisicelo se-arhente yokunyanzeliswa komthetho. Sinokuphinda sixele olo lwazi kubantu besithathu: (i) ngeenjongo zokukhusela ubuqhetseba kunye nokunciphisa umngcipheko kumatyala, (ii) apho sikholelwa ukuba kufanelekile ukuphanda, ukuthintela, okanye ukuthatha amanyathelo ngokubhekisele kwimisebenzi engekho mthethweni, (iii) ukunyanzelisa amalungelo ethu avela kuzo naziphi na iikhontrakthi ezenziwe phakathi kwakho nathi, kubandakanya neMigaqo yokuSebenzisa, le Migaqo-nkqubo, kunye nokuhlawulwa kunye nokuqokelelwa, (iv) ukuba sikholelwa ukuba ukuxelwa kunyanzelekile okanye kufanelekile ukukhusela amalungelo ethu, ipropathi, okanye ukhuseleko okanye yabathengi bethu, abasebenzisi, iikontraki okanye abanye, (v) njengoko kufunwa njalo ngumthetho.
Unxibelelwano lweNtengiso kunye noKwabelana namaQela esiThathu. Ungahlaziya ukhetho lwakho ngokubhekisele ekufumaneni unxibelelwano oluthile lokuthengisa kuthi, kunye nokwabelana kwethu ngolwazi lomntu kunye nomntu wesithathu. Unokwenza njalo ngokuqhagamshelana nathi apha imfihlo@astroshopee.org . Unokukhetha ukufumana unxibelelwano lokuthengisa nge-imeyile, ngokulandela imiyalelo 'yokungabhalisi' enikezelwe kuyo yonke imeyile oyifumanayo kuthi. Unokuhlengahlengisa izaziso zakho zesixhobo kwifowuni yakho okanye kuseto lweapp.
Ukhetho lweNtengiso. Sinokusebenza kunye nomntu wesithathu ukubonisa iintengiso, kunye nokuzibandakanya ekuqokeleleni idatha, ekunikeni ingxelo, kuhlalutyo lwesiza, ukuhanjiswa kweentengiso kunye nemilinganiselo yokuphendula kwiSayithi lethu nakwiiwebhusayithi zomntu wesithathu kunye nokusetyenziswa ngokuhamba kwexesha. La maqela esithathu anokusebenzisa ii-cookies, ii-web beacons, iipikseli, kunye nobunye ubuchwepheshe obufanayo ukwenza lo msebenzi. Banokufumana ulwazi malunga newebhusayithi ozindwendwelayo, usetyenziso olisebenzisayo, kunye nolunye ulwazi oluvela kwizikhangeli zakho kunye nezixhobo ukuze ubonise intengiso enokuthi ilungiselelwe iimfuno zakho ngaphakathi nangaphandle kweSayithi lethu nakwezinye iiplatifomu. Olu hlobo lwentengiso lwaziwa njengentengiso esekwe kumdla.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nentengiso esekwe kumdla kwidesktop yakho okanye kwisiphequluli sefowuni, kunye nokukwazi kwakho ukuphuma kolu hlobo lwentengiso ngabantu besithathu, nceda undwendwele Iphulo lokuThengisa iNethiwekhi kunye / okanye iDAA Inkqubo yokuZilawula yoThengiso lweeNdlela zokuziphatha kwi-Intanethi . Ukufunda ngakumbi malunga nentengiso esekwe kumdla kwii -apps zeselfowuni kunye nendlela yokuphuma kolu hlobo lwentengiso ngabantu besithathu, ungandwendwela AppChoices . Nceda uqaphele ukuba naluphi na ukhetho lokuphuma onokulusebenzisa kwezi nkqubo luya kusebenza kuphela kwintengiso esekwe kumdla ngabantu besithathu obakhethileyo kodwa isaza kuvumela ukuqokelelwa kwedatha yezinye iinjongo, ezinje ngohlalutyo, uphando kunye nokusebenza. Usenokuqhubeka nokufumana intengiso, kodwa loo ntengiso isenokungahambelani kangako nemidla yakho.
Amalungelo abucala eCalifornia. Ikhowudi yaseCalifornia Civil Code Icandelo 1798.83 livumela abasebenzisi beSayithi yethu ukuba bangabahlali baseCalifornia ukuba bacele ulwazi oluthile malunga nokuxelwa kwethu kolwazi lomntu ngamnye kubantu besithathu ngeenjongo zokuthengisa ngokuthe ngqo. Ukwenza isicelo esinjalo, nceda unxibelelane nathi apha imfihlo@astroshopee.org .
UMGAQO-NKQUBO WOKUPHEPHA (NGAPHANDLE kwe-EU)
Iicookies kunye nobunye ubuChwepheshe. Thina, kunye namahlakani ethu, ababoneleli beenkonzo zomntu wesithathu, kunye namaqabane eshishini singathumela 'ii-cookies' kwikhompyuter yakho okanye sisebenzise itekhnoloji efanayo ukuphucula amava akho kwi-Intanethi kwiSayithi lethu kunye nentengiso kunye nemithombo yeendaba kwi-Intanethi nakwiapps.
Iicookies ziifayile zetekisi ezincinci ezinolwazi olukhutshelwa kwifowuni yakho xa undwendwela iwebhusayithi, kubandakanya indawo yethu. Iicookies zithunyelwa emva kwi-domain yewebhu kutyelelo lwakho olulandelayo kuloo ndawo. Uninzi lwamaphepha ewebhu anezinto ezivela kwimimandla emininzi yewebhu ke xa undwendwela iwebhusayithi, isikhangeli sakho sinokufumana ikuki kwimithombo eliqela. Iicookies ziluncedo kuba zivumela iwebhusayithi ukuba ibone isixhobo somsebenzisi. Iicookies zikuvumela ukuba uzulazule kwiwebhusayithi ngokufanelekileyo, khumbula izinto ozikhethayo kwaye uphucule ngokubanzi amava omsebenzisi. Zingasetyenziselwa ukulungelelanisa intengiso kwimidla yakho ngokulandela umkhangeli wakho wokukhangela kwiwebhusayithi. Iicokies zeseshoni ziyacinywa ngokuzenzekelayo xa uvala isikhangeli sakho kwaye iicokies eziqhubekayo zihlala kwisixhobo sakho emva kokuba isikhangeli sivalekile (umzekelo, ukukhumbula izinto ozikhethayo xa ubuyela eSizeni).
Sinokusebenzisa iipikseli okanye 'ii-web beacons' ezithi zibeke iliso ekusebenziseni indawo yethu. Iibhikhoni zewebhu ziifayile ezincinci ze-elektroniki ezidityaniswe kwiSiza okanye unxibelelwano lwethu (umzekelo, ii-imeyile) esivumela thina, umzekelo, ukubala abasebenzisi abatyelele loo maphepha okanye bavule i-imeyile okanye ezinye iinkcukacha ezinxulumene noko. Sinokudibanisa 'izixhobo zophuhliso lwesoftware' ('SDKs') kwizicelo zethu zokwenza imisebenzi efanayo njengecookie kunye neebhikhoni zewebhu. Umzekelo, ii-SDKs zinokuqokelela ulwazi lobuchwephesha kunye nokusetyenziswa okunje ngeefowuni zeselfowuni kunye nonxibelelwano lwakho neSiza kunye nezinye ii -apps ezihambayo.
Sinokusebenzisa ii-cookies kunye nezinye iitekhnoloji ukunceda ukuqaphela isikhangeli sakho okanye isixhobo, ukugcina izinto ozikhethayo, ukubonelela ngeempawu ezithile zeSayithi, kunye nokuqokelela ulwazi malunga nokunxibelelana neSiza sethu, umxholo wethu, kunye nonxibelelwano lwethu.
Sinokusebenzisa ikuki kunye nezinye iitekhnoloji (i) ukubonelela, ukuphuhlisa, ukugcina, ukwenza ubuqu, ukukhusela kunye nokuphucula indawo yethu, iimveliso, iinkqubo kunye neenkonzo kunye nokuqhuba ishishini lethu, (ii) ukwenza uhlalutyo, kubandakanya ukuhlalutya kunye ingxelo malunga nokusetyenziswa kunye nokusebenza kweSiza sethu kunye nezinto zokuthengisa, (iii) ukukhusela, ukuchonga nokukhusela ubuqhetseba kunye nezinye izinto ezingekho mthethweni, (iv) ukwenza idatha edibeneyo malunga namaqela okanye iindidi zabasebenzisi bethu, (v) ukungqamanisa abasebenzisi kwizixhobo zonke, abaxhasi, amaqabane oshishino, kwaye ukhethe umntu wesithathu, kwaye (vi) thina kunye nabanxulumene nathi, amaqabane oshishino, kwaye ukhethe abantu besithathu ekujolise kubo, ukunikezela, okanye ukuthengisa, iimveliso, iinkqubo, okanye iinkonzo. Iicookies kunye nezinye iitekhnoloji zikwalungiselela kwaye zilinganise ukusebenza kwentengiso eboniswe okanye ehanjiswe ngathi okanye ngathi okanye ezinye iinethiwekhi okanye iisayithi. Ngokundwendwela iSiza, nokuba ungumsebenzisi obhalisiweyo okanye kungenjalo, uyavuma, kwaye uyavuma ukuba usinika imvume yakho yokulandela umkhondo wemisebenzi yakho kunye nokusebenzisa kwakho iSiza ngobuchwephesha obuchazwe apha ngasentla, kunye netekhnoloji efanayo ephuhliswe kwixesha elizayo , kwaye sinokusebenzisa obu buchwephesha bokulandela umkhondo kwii-imeyile esizithumela kuwe.
Unokuhlengahlengisa isikhangeli sakho ukuba sizikhabe ii-cookies. Ukulawula iicookies ngolawulo lwebrawuza akunakunciphisa ukusetyenziswa kwetekhnoloji. Nceda uqhagamshelane noseto lwesikhangeli sakho ngolwazi oluthe kratya. Nangona kunjalo, ukuvimba iicookies okanye itekhnoloji efanayo inokukunqanda ungafikeleli kwimixholo ethile okanye kwiimpawu ezikule ndawo. Okwangoku asiphenduli ku Musa ukuKhangela imiqondiso kuba umgangatho wobugcisa ofanayo awukenziwa. Siyaqhubeka nokujonga ubuchwephesha obutsha kwaye sinokwamkela umgangatho xa sele yenziwe enye.
Ukulawula iiKuki kunye nezinye iiTekhnoloji
Ngokungqongqo Cookies eziyimfuneko
Ezi cookies zibalulekile ukwenzela ukuba ukwazi ukuhamba ujikeleze iSiza kwaye usebenzise amanqaku ayo. Ngaphandle kwezi kuki, iinkonzo ozicelileyo (njengokuhamba phakathi kwamaphepha) azinakubonelelwa. Olu luhlu lulandelayo lubeka eminye yemizekelo yezi cookies:
Umthombo wecookie: astroshopee.com
Sisebenzisa idatha egcinwe kulecookie kulawulo lwenkqubo, ukuphucula ukhuseleko, kunye nokubonelela ngokufikelela ekusebenzeni okufunekayo kwindawo leyo
Ulwazi oluthe kratya: Ikuki yeseshoni (iphelelwa xa isikhangeli sivaliwe)
Sisebenzisa iikuki zokuhlalutya ukuhlalutya indlela abatyeleli bethu abayisebenzisa ngayo iSiza kunye nokujonga ukusebenza kwabo. Oku kusivumela ukuba sinikezele ngamava akumgangatho ophezulu ngokwenza ngokwezifiso umnikelo wethu kunye nokuchonga ngokukhawuleza kunye nokulungisa nayiphi na imiba evelayo. Umzekelo, sinokusebenzisa ii-cookies ukuze sigcine ukuba ngawaphi amaphepha athandwa kakhulu, yeyiphi indlela yokudibanisa phakathi kwamaphepha asebenza kakhulu, kunye nokufumanisa ukuba kutheni amanye amaphepha efumana imiyalezo yemposiso. Sinokusebenzisa ezi kuki ukuqaqambisa amanqaku okanye iinkonzo zeSayithi esicinga ukuba ziya kuba nomdla kuwe ngokusekwe ekusebenziseni kwakho iSiza. Ulwazi oluqokelelwe zezi khukhi aluhambelani nenkcukacha zakho zobuqu kuthi okanye ziikontraki zethu kwaye zisetyenziswa kuphela kumdibaniso kunye nefom echongiweyo. Olu luhlu lulandelayo lubeka eminye yemizekelo yezi cookies:
Umthombo wecookie: Uhlalutyo lukaGoogle
Ezi cookies zisetyenziselwa ukuqokelela ulwazi malunga nendlela abatyeleli abayisebenzisa ngayo indawo yethu. Sisebenzisa ulwazi ukuqokelela iingxelo nokusinceda ukuphucula indawo yethu. Iicookies ziqokelela ulwazi ngendlela engaziwayo, kubandakanya nenani labatyeleli besiza, apho iindwendwe zize khona kwisiza kunye namaphepha abebetyelele.
Cofa apha malunga nomgaqo-nkqubo wabucala kaGoogle ngokubhekisele kuGoogle Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Unokukhetha ukuphuma ekulandeleleni ngoGoogle Analytics ngokundwendwela: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Imvelaphi yecookie: Ukuhamba kwemouse
Sisebenzisa iMouseflow ukufaka ulwazi lomsebenzisi olungaziwayo ukuba iindwendwe zesiza zinxibelelana njani nezinto zekhasi. Sisebenzisa le datha ingaziwayo ukuhambisa ingxelo yamava esayithi aphuculweyo kubasebenzisi.
Cofa apha ukuze ubone uMgaqo-nkqubo wabucala weMouseflow: http://mouseflow.com/privacy/
Ukuba ungathanda ukuphuma, ungakwenza oko ku-https: //mouseflow.com/opt-out.
Sisebenzisa ikuki ukukubonelela ngomsebenzi othile. Umzekelo, ukujonga umxholo wevidiyo, imisinga ephilayo, okanye ukukhumbula ukhetho olwenzayo kunye nokubonelela ngezinto ezomeleleyo kunye nezakho. Ezi cookies azisetyenziswanga ukulandelela ukubrawuza kwakho kwezinye iisayithi. Olu luhlu lulandelayo lubeka eminye yemizekelo yezi cookies:
Umthombo weKuki: Uphendlo lweAjax kuGoogle
Le cookie ibonelela ngohlobo lwentloko yohlobo olufumaneka kwimivalo kwiSayithi. Oku kunika iingcebiso ngamagama aphambili kwaye kunceda ekuphuculeni imibuzo yokukhangela.
Ikuki yeseshoni (iphelelwa lixesha xa ibrawuza ivaliwe)
Iikuki zentengiso (okanye iicookies ezijolise kuzo) ziqokelela ulwazi malunga nemikhwa yokukhangela enxulumene nesixhobo sakho kwaye zisetyenziselwa ukwenza intengiso ibenomdla ngakumbi kuwe nakwimidla yakho. Ezi kuki zikwalinganisa ukusebenza kwemikhankaso yentengiso kwaye zilandelele ukuba ngaba iintengiso zibonisiwe ngokufanelekileyo. Olu luhlu lulandelayo lubeka eminye yemizekelo yezi cookies:
Umthombo weKuki: DoubleClick
I-DoubleClick isebenzisa ikuki ukuphucula intengiso. Ezinye izicelo eziqhelekileyo kukujolisa kwintengiso esekwe kwinto efanelekileyo kumsebenzisi, ukuphucula ukunika ingxelo malunga nokusebenza kwephulo, kunye nokunqanda ukubonisa iintengiso esele zibonwe ngumsebenzisi.
Cofa apha umgaqo-nkqubo wabucala kaGoogle ngokubhekisele ku-DoubleClick https://policies.google.com/privacy?hl=en
Unokukhetha ukulandela umkhondo ngu-DoubleClick ngokundwendwela https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Umthombo wecookie: Facebook Pixel
Sisebenzisa i-pixel ye-Facebook njengendlela yokuqonda ngcono abasebenzisi bethu, ukwenza umxholo kunye nentengiso, ukubonelela ngeempawu zosasazo zasekuhlaleni kunye nokuhlalutya ukugcwala kwabantu kwisiza. Idatha eqokelelweyo ihlala ingaziwa. Oku kuthetha ukuba asinakubona idatha yobuqu yakhe nawuphi na umsebenzisi. Nangona kunjalo, idatha eqokelelweyo igcinwa kwaye iqhutywa yi-Facebook.
I-Facebook iyakwazi ukudibanisa idatha kunye neakhawunti yakho ye-Facebook kwaye isebenzise idatha kwiinjongo zayo zentengiso, ngokuhambelana nomgaqo-nkqubo wabo wabucala ofunyenwe phantsi: https://www.facebook.com/about/privacy/
Ukuba ungathanda ukuphuma, ungakwenza oko ku-https: //www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Iikuki zentengiso zinokusetyenziswa ziindawo zosasazo zasekuhlaleni ezinxibelelene neSayithi yethu, ezinje ngamaqhosha 'Okwabelana' okanye abadlali beaudiyo / ividiyo. Ezi cookies zibonelela ngokusebenza okuceliweyo. Ezo ndawo zosasazo zasekuhlaleni zibeka iicookies zentengiso zombini xa undwendwela iSayithi lethu naxa usebenzisa iinkonzo zabo kwaye uzulazula kwindawo yethu. Iinkqubo zecookie zezinye zezi ndawo zosasazo zasekuhlaleni zibekwe apha ngezantsi:
Umgaqo-nkqubo wecookie ka-Facebook
Umgaqo-nkqubo weKuki we-Twitter
Umgaqo-nkqubo weKuki we-Instagram
Umgaqo-nkqubo wecookie wePinterest
Umgaqo-nkqubo wecookie ka-YouTube
Umgaqo-nkqubo weSkyCloud Cookie
Umgaqo-nkqubo weGoogle Plus Cookie
UKUFIKELELA, UKULUNGISA NOKUCIMA IINKCUKACHA ZAKHO
Ukubuza kulwazi lomntu siqu esiqokelele malunga nawe kwi-Intanethi kwiSayithi apho lo Mgaqo-nkqubo wabucala uthunyelwe khona okanye ukulungisa olo lwazi, ungasithumela i-imeyile imfihlo@astroshopee.org . Ungacela kwaye ufumane ukususwa kweMinikelo yaBasebenzisi ngokuthumela i-imeyile imfihlo@astroshopee.org ngesicelo sakho kwaye ucacisa iGalelo elithile loMsebenzisi ofuna ukusisusa. Asinakho ukwamkela isicelo sokutshintsha okanye sokucima naluphi na ulwazi ukuba sikholelwa ekubeni isenzo esinjalo siya kwaphula nawuphi na umthetho okanye iimfuno zomthetho okanye senze ukuba ulwazi lungalunganga. Ukususwa kweGalelo lakho loMsebenzisi kwiSiza akuqinisekisi ngokususwa ngokupheleleyo okanye okupheleleyo kweziGalelo zoMsebenzisi kwiSayithi njengoko iikopi zinokuhlala zibonwa kumaphepha agciniweyo kunye noovimba okanye zinokukhutshelwa okanye zigcinwe ngabanye abasebenzisi beSayithi. Ungarhoxa kuyo nayiphi na iincwadana zeendaba okanye iiimeyile zentengiso ezahlukeneyo nangaliphi na ixesha ngokunqakraza kwikhonkco elithi 'ungazibhalisi' ezinikiweyo kunxibelelwano olunje. Awunakho ukuphuma kunxibelelwano olunxulumene neSiza, njengokuqinisekiswa kweakhawunti, ukuqinisekiswa kokuthenga kunye nemiyalezo yolawulo, ukuba nje ubhalisile kwiSiza.
UKUQHUBA IINKCUKACHA ZAKHO
Indawo ibanjelwe eUnited States. Singakuthintela ukubakho kweSiza okanye nayiphi na inkonzo okanye imveliso echazwe kwiSiza kuye nawuphina umntu okanye indawo yejografi nangaliphi na ixesha. Ukuba ukhetha ukufikelela kwiSiza ngaphandle kwe-United States, wenza njalo ngomngcipheko wakho.
Similisele amanyathelo afanelekileyo obuchwephesha kunye nemibutho ukukhusela iSiza. Ngelishwa, ukuhanjiswa kolwazi nge-Intanethi kunye neqonga leselula akukhuselekanga ngokupheleleyo. Nangona sithatha amanyathelo afanelekileyo okukhusela iinkcukacha zakho, asinakuqinisekisa ngokhuseleko lweenkcukacha zakho. Nakuphi na ukudluliselwa kolwazi lomntu siqu nge-Intanethi kusemngciphekweni wakho. Asinaxanduva lokuthintela nasiphi na isetingi yabucala okanye amanyathelo okhuseleko esiwanikayo. Ukhuseleko kunye nolwazi lwakho luxhomekeke kuwe. Apho sikunike khona (okanye apho ukhethe khona) igama eligqithisiweyo lokufikelela kwiindawo ezithile zeSayithi lethu, unoxanduva lokugcina le mfihlo iyimfihlo. Akufanele wabelane ngephasiwedi yakho kunye nabani na.
UTSHINTSHO KUMGAQO-NKQUBO WETHU
Singahlaziya iPolisi yethu amaxesha ngamaxesha. Siza kukwazisa malunga naluphi na utshintsho lwezinto ezibonakalayo kulo Mgaqo-nkqubo wabucala ngokubeka isaziso kwiNdawo yethu. Siyakukhuthaza ukuba umane ujonga kwakhona kwaye uphonononge le Polisi ukuze wazi naluphi na utshintsho olwenziwe kutshanje.
INDLELA YOKUQHAGAMSHELANA NATHI
Iinkxalabo Zabucala. Ukuba unenkxalabo okanye isikhalazo malunga nobumfihlo kwiSayithi, nceda uqhagamshelane nathi eastroshopee Digital Media, LLC., Attn: Imicimbi yezomthetho, iZiko loYilo lwePacific, iRed Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9th Floor, East Hollywood , CA, 90069, USA okanye i-imeyile kuthi imfihlo@astroshopee.org . Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukukuphendula ngexesha elifanelekileyo nangobungcali ukuze siphendule imibuzo yakho kwaye sisombulule iingxaki zakho. © Iastroshopee Digital Media, LLC. Onke Amalungelo Agciniwe. I-Purpleclover kunye ne-Purpleclover.com ziimpawu zorhwebo zeastroshopee Digital Media, LLC
ISAZISO SEBENZA BOMFIHLO KWABAHLALI BASEKHALIDINI
Ukuhlaziywa kokugqibela: NgoJanuwari 1, 2020
ISAZISO ESIBALULEKILEYO SABAHLALI baseCALIFORNIA songeza ulwazi oluqulethwe kulo Mgaqo-nkqubo wabucala kwaye sisebenza kuphela kubatyeleli, kubasebenzisi, nakwabanye abahlala kwi-State of California ('abathengi' okanye 'wena'), kwaye inikezela ngolwazi malunga namalungelo abathengi phantsi kwe Umthetho wabucala wabathengi waseCalifornia ka-2018 ('CCPA') kunye neminye imithetho yabucala yaseCalifornia. Nawaphi na amagama achazwe kwiCCPA anentsingiselo efanayo xa esetyenziswa kwesi saziso.
IINKCUKACHA ZOMNTU SIQOKELELA
Siqokelela ulwazi oluchonga, olunxulumene, oluchaza, olukhombisayo, olukwazi ukunxulunyaniswa, okanye lunokudityaniswa ngokufanelekileyo, ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo, nomthengi othile okanye isixhobo ('ulwazi lomntu'). Ngokukodwa, siqokelele ezi ndidi zilandelayo zolwazi lomntu malunga nabathengi kwezi nyanga zilishumi elinambini zidlulileyo:
I-Intanethi okanye enye imisebenzi yenethiwekhi efanayo (njengembali yokukhangela)
Idatha yendawo (njengendawo ekuyo isixhobo sakho)
Ulwazi lomntu alubandakanyi:
Ulwazi olufumaneka esidlangalaleni kwiirekhodi zikarhulumente.
Ulwazi oluchongiweyo okanye oluhlanganisiweyo lwabathengi.
Ulwazi alufakwanga kububanzi beCCPA, njenge:
ulwazi lwezempilo okanye lwezonyango olugqunywe nguMthetho wokuPhathwa kwe-Inshurensi yezeMpilo kunye noMthetho woXanduva ngo-1996 (HIPAA) kunye noMthetho waseCalifornia wokuChophela iMfihlo yoLwazi lwezoNyango (i-CMIA) okanye idatha yolingo lweklinikhi;
Ulwazi lomntu siqu olugutyungelwe yimithetho ethile yecandelo elithile labucala, kubandakanya noMthetho oNika iNgxelo ngetyala oLungileyo (i-FRCA), iGrama-Leach-Bliley Act (i-GLBA) okanye i-California Information Information Act (FIPA), kunye noMthetho woKhuseleko lwaBucala ka-1994.
Sinokuqokelela ngokuzenzekelayo ulwazi oluthile lobuchwephesha kunye nokusetyenziswa xa usebenzisa iSayithi lethu okanye unxibelelana neentengiso zethu ezikwi-intanethi kunye nomxholo, onje ngohlobo lwesixhobo, isikhangeli, kunye nenkqubo oyisebenzisayo, isazisi esikhethekileyo sedivayisi, idilesi ye-IP, isixhobo kunye noseto lwesikhangeli iphepha lewebhu olindwendwelayo, ulwazi malunga nendlela onxibelelana ngayo neSayithi yethu kunye neqela lethu lesithathu (njengamaphepha owatyelelayo), kunye nolwazi olusivumela ukuba siqaphele kwaye sidibanise umsebenzi wakho kwizixhobo nakwiiwebhusayithi. Singasazi isixhobo sakho ukuba sikunike amava abhalwe wena kunye nentengiso kwizixhobo ozisebenzisayo.
Nceda uqaphele ukuba iinkampani ezithile zibeka ubuchwephesha bokulandela umkhondo njengeicookies kwiSayithi yethu ezivumela ezo nkampani ukuba zifumane ulwazi malunga nomsebenzi wakho kwiSayithi yethu enxulumene nesikhangeli sakho okanye isixhobo. Bona eyethu Umgaqo-nkqubo weKuki (Ngaphandle kwe-EU) apha ngasentla ngolwazi oluthe kratya malunga nokulandela umkhondo kwiSiza sethu kunye nendlela esinokubusebenzisa ngayo obu buchwephesha ukuqokelela olu lwazi. Ezi nkampani zinokusebenzisa le datha ukwenza umxholo ube ngowakho kunye nokukubonelela ngeentengiso ezifanelekileyo kwiSiza sethu okanye kwabanye, egameni lethu nangenxa yabanye abathengisi. Ukuba wenza isicelo sokukhetha ukuphuma, kwaye ungathanda ukuphuma kwindlela yokulandela umkhangeli wecookie ngeenjongo zentengiso, nceda uqaphele ukuba kuya kufuneka uhlengahlengise ngokwahlukeneyo useto lwesikhangeli sakho kwaye usete ukhetho lwakho njengoko kuchaziwe kuthi Umgaqo-nkqubo weKuki (Ngaphandle kwe-EU) ngentla.
Unokwazi ukufikelela kumanqaku eSayithi ngokuhlala kuluntu, iiforamu, kunye neendawo zosasazo zasekuhlaleni, iinkonzo, ii-plug-ins, kunye nokusetyenziswa okwenziwe ngababoneleli beendaba zosasazo ('iiSayithi zeMidiya yezeNtlalontle'). Useto lwakho lwangasese kwiiSayithi zeMidiya yokuSasaza, kunye nemigaqo-nkqubo yabo yabucala, iya kugqiba ulwazi lomntu kunye nolunye olunokwabelana nathi, okanye olufunyenwe sithi, ngokusebenzisa itekhnoloji yokulandela umkhondo kwimidiya yoluntu xa ungena kwiSayithi, kwaye isenokuba eqokelelwe kwaye isetyenziswe zezi Sayithi zeMithombo yeendaba. Apho kuvunyelwe ngumthetho, ngokunika olu Lwazi okanye enye indlela yokunxibelelana neSiza sethu kwiiSayithi zeMidiya yezeNtlalontle, uyavuma ukusebenzisa kwethu ulwazi oluvela kwiZiko lezeMithombo yeendaba ngokuhambelana nalo Mgaqo-nkqubo wabucala.
Ulwazi lwendawo. Siqokelela ulwazi malunga nendawo okuyo, njengelizwe lakho okanye idilesi ye-IP. Siqokelela kanye indawo esikuyo isixhobo sakho xa ungena kwiSiza ngesixhobo sakho esiphathwayo. Ayizizo zonke ezi nkcukacha ezigciniweyo, kwaye ayizizo zonke ezi nkcukacha ezinxibelelana nawe.
Sisebenzisa ulwazi lomntu siqu ngeenjongo ezichazwe kulo mgaqo-nkqubo okanye ezichazwe ngexesha lokuqokelela okanye ngemvume yakho, kubandakanya ezi njongo zilandelayo:
Nikezela, uthengise, kwaye ubhengeze iimveliso, iinkqubo, kunye neenkonzo ezivela kuthi nakwimibutho yethu, kunye namaqabane eshishini anokuba ngumdla kuwe. Sinokusebenzisa ulwazi oluqokelelweyo ukubonisa iintengiso kubaphulaphuli bethu ekujoliswe kubo.
Qinisekisa isazisi sakho ngokunxulumene nezicelo zeCCPA ezenziwe ngezantsi.
IMITHOMBO ESIVELA KUYO SIQOKELELA IINKCUKACHA ZAKHO
Siqokelela iinkcukacha zobuqu ngokuzenzekelayo kwizixhobo zakho. Sisebenzisa izixhobo zokulandela umkhondo ukuqokelela ulwazi xa usebenzisa okanye unxibelelana neSiza, iintengiso zethu kunye nomxholo okwi-Intanethi kunye nee-imeyile zethu.
Sinokuqokelela iinkcukacha zakho kulwazi olufumanekayo esidlangalaleni.
Sifumana iinkcukacha zobuqu kubanikezeli esibaqeshele ukuba basebenze egameni lethu. Umzekelo, abathengisi abasindayo okanye abagcina iiwebhusayithi zethu kwaye basithumelele ii-imeyile zentengiso banokusinika ulwazi.
Sinokufumana ulwazi lobuqu kwamanye amaqela, njengaxa amahlakani entengiso okanye amaqabane entengiso abelana ngolwazi nathi. Sinokufumana ulwazi kwiiSayithi zeMithombo yeendaba, njengoko kuchaziwe apha ngasentla.
INDLELA ESABELA NGAYO SIZA SIZAZISELE IINKCUKACHA ZAKHO
Singaziveza iinkcukacha zakho zobuqu kwamanye amaqela ngeenjongo zeshishini. Kwiinyanga ezilishumi elinesibini (12) ezidlulileyo, sichazile olu luhlu lulandelayo lolwazi lomntu ngeenjongo zethu zeshishini:
Singaluchaza olu didi lungasentla lolwazi lomntu buqu ngeenjongo zethu zeshishini kula macandelo alandelayo amaqela:
Umntu wesithathu osigunyazisa yena okanye iiarhente zakho ukuba sichaze iinkcukacha zakho ngokunxulumene neemveliso okanye iinkonzo esikunika zona.
Kwiinyanga ezilishumi elinambini ezidlulileyo (12), khange sithengise naluphi na ulwazi lomntu ngokokuqonda kwethu iCCPA. Inkampani ayizukuthengisa iinkcukacha zakho kwixesha elizayo, ngokwendlela esiliqonda ngayo iCCPA, ngaphandle kokukunika isaziso kwaye ikunike nethuba lokuphuma ngelo xesha.
AMALUNGELO NOKHETHO LWAKHO
I-CCPA ibonelela abathengi (abahlali baseCalifornia) ngamalungelo athile ngokubhekisele kwiinkcukacha zabo. Eli candelo lichaza amalungelo akho eCCPA kwaye lichaza nendlela yokusebenzisa la malungelo.
Ukufikelela kulwazi oluthile kunye namalungelo okuphatheka kweDatha
Unelungelo lokucela ukuba siveze ulwazi oluthile kuwe malunga nokuqokelela kwethu kunye nokusebenzisa ulwazi lwakho kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo. Nje ukuba sifumane kwaye siqinisekise isicelo sakho somthengi, siya kukuchazela ezinye okanye zonke ezi zinto zilandelayo ngokuxhomekeke kwisicelo sakho:
Iziqwenga ezithile zolwazi lomntu siqu esiziqokelele malunga nawe (zikwabizwa ngokuba sisicelo sokuphatheka kwedatha).
Iindidi zolwazi lomntu siqu esiziqokelele ngawe.
Iindidi zemithombo yolwazi lomntu esiqokelelene ngawe.
Ishishini lethu okanye injongo yorhwebo yokuqokelela okanye ukuthengisa olo lwazi lomntu.
Iindidi zamanye amaqela esabelana nawo ezo nkcukacha zobuqu.
Ukuba sithengisile okanye sichaza iinkcukacha zakho ngenjongo yeshishini, uluhlu olwahlukileyo oluchazayo:
ukuthengisa, ukuchonga iindidi zolwazi lomntu siqu ezithe zathengwa kwicandelo ngalinye lomamkeli; kwaye
ukubhengezwa ngenjongo zeshishini, kuchonga iindidi zolwazi lomntu olufunyenwe kudidi ngalunye lomamkeli.
Ukususwa kwamalungelo okucela
Unelungelo lokucela ukuba sisuse nayiphi na ingcaciso yakho yobuqu esiyiqokelele kuwe kwaye sayigcina, ngokuxhomekeke kukungafani okuthile. Nje ukuba sifumane kwaye siqinisekise isicelo sakho somthengi, siya kucima (kwaye sijolise kubanikezeli beenkonzo zethu ukuba bacime) iinkcukacha zakho zobuqu kwiirekhodi zethu, ngaphandle kokuba kusebenza okwahlukileyo.
UkuSebenzisa ukuFikelela, ukuHamba ngeDatha, kunye namaLungelo okususa
Ukusebenzisa ukufikelela, ukuphatheka kwedatha, kunye nokususa amalungelo achazwe apha ngasentla, nceda ungenise isicelo somthengi kuthi:
Ukusitsalela umnxeba ku: 1-866-522-5025
Sithumela i-imeyile apha: imfihlo@astroshopee.org
Nguwe kuphela okanye umntu omgunyazise ukuba enze into egameni lakho, onokwenza isicelo somthengi esinxulumene nenkcukacha zakho.
Unokwenza kuphela isicelo sokufikelela okanye ukuphatheka kwedatha kabini kwisithuba seenyanga ezili-12. Isicelo somthengi kufuneka:
Nika idilesi ye-imeyile efanelekileyo, inombolo yomnxeba, idilesi okanye olunye ulwazi olwaneleyo olusivumela ukuba siqinisekise ngokuqinisekileyo ukuba ungulo mntu siqokelele ulwazi ngaye okanye ummeli ogunyazisiweyo.
Chaza isicelo sakho ngeenkcukacha ezaneleyo esivumela ukuba siqonde kakuhle, sivavanye, kwaye siphendule kuso.
Asinakuphendula kwisicelo sakho okanye sikunikeze ngeenkcukacha zakho ukuba asinakuqinisekisa isazisi sakho okanye igunya lommeli wakho lokwenza isicelo kwaye siqinisekise ukuba iinkcukacha zakho zinxulumene nawe. Ukwenza isicelo somthengi akudingi ukuba wenze iakhawunti nathi. Siza kusebenzisa kuphela ulwazi lomntu siqu olunikezwe kwisicelo somthengi ukuqinisekisa ubungqina besicelo okanye igunya lokwenza isicelo.
Ixesha lokuphendula kunye nefomathi
Sizama ukuphendula kwisicelo esiqinisekisiweyo somthengi kwisithuba seentsuku ezingama-45 sifunyenwe. Ukuba sifuna ixesha elingaphezulu (ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-90), siya kukwazisa ngesizathu kunye nexesha elandisiweyo ngokubhala. Ukuba uneakhawunti nathi, siya kuyisa impendulo yethu ebhaliweyo kule akhawunti. Ukuba awunayo iakhawunti kuthi, siya kuyisa impendulo yethu ebhaliweyo ngeposi okanye ngombane, ngokhetho lwakho. Nakuphi na ukubhengezwa esikubonayo kuya kubandakanya kuphela iinyanga ezili-12 eziphambi kokufunyanwa kwesicelo. Impendulo esiyinikezayo iya kuchaza nezizathu zokuba asinakho ukuthobela isicelo, ukuba siyasebenza. Kwizicelo zokuphatheka kwedatha, siya kukhetha ifomathi yokubonelela ngenkcukacha zakho ezisebenziseka ngokulula kwaye kufuneka zikuvumele ukuba udlulise ulwazi ukusuka kwelinye iziko ukuya kwelinye iziko ngaphandle kwesithintelo.
Sinelungelo lokuhlomela esi saziso sabucala ngokuqonda kwethu nangaliphi na ixesha. Xa sisenza utshintsho kwesi saziso sabucala, siya kukwazisa ngesaziso esikwiwebhusayithi yethu iphepha lasekhaya.
Ukuba unenkxalabo okanye isikhalazo malunga nobumfihlo kwiSayithi, iindlela esiqokelela ngazo kwaye sisebenzisa ulwazi lwakho lomntu siqu, ukhetho lwakho kunye namalungelo malunga nokusetyenziswa okunjalo, okanye unqwenela ukusebenzisa amalungelo akho phantsi komthetho waseCalifornia, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi eastroshopee Digital Media, LLC., Attn: Imicimbi yezomthetho, iZiko loyilo lwePasifiki, iZakhiwo eziBomvu eNtshona, i-750 N. iSan Vicente Blvd., kuMgangatho we-9, eMpuma Hollywood, CA, 90069, e-USA, sithumele i-imeyile apha imfihlo@astroshopee.org okanye utsalele umnxeba ku-1-866-522-5025.
UMGAQO-NKQUBO WABUCALA WABASEBENZISI BE-EU
Iastroshopee Digital Media, LLC d / b / iastroshopee Industries, amahlakani ayo kunye neenkxaso ('astroshopee', 'thina', 'thina', okanye 'wethu') sixabisa ubumfihlo babasebenzisi bethu kunye nababhalisi. Sizama ukungafihli malunga nokuba siluqokelela njani kwaye silusebenzisa njani uLwazi lwakho (njengoko kuchaziwe ngezantsi), ukugcina ulwazi lwakho lukhuselekile kwaye sikunike ukhetho olunentsingiselo. Lo Mgaqo-nkqubo Wabucala ('Umgaqo-nkqubo') uchaza iindlela zabucala ze www.astroshopee.com iwebhusayithi ('iSiza'), ephethwe, kwaye iqhutywa, iphelele okanye iyinxalenye, yiastroshopee. Lo Mgaqo-nkqubo ucacisa ukuba luqokelelwa njani, lusetyenziswa njani, kwaye luxelwa njani yiastroshopee njengomlawuli wedatha.
Lo mgaqo-nkqubo usebenza kwindlela yethu yokufumana ulwazi kwi-Intanethi malunga neSiza ngokubhekisele kubasebenzisi abakwiManyano yaseYurophu. Lo Mgaqo-nkqubo awusebenzi kwidatha yobuqu eqokelelwe nakweyiphi na iwebhusayithi yomntu wesithathu okanye ii -apps, kubandakanya iwebhusayithi onokufikelela kuyo kwiSiza. Ezo webhusayithi kunye neeapps zinokuba nemigaqo-nkqubo yazo yabucala, esikukhuthaza ukuba uyifunde ngaphambi kokubonelela ngalo naluphi na ulwazi lomntu okanye ngalo.
Nceda ufunde lo Mgaqo-nkqubo ngononophelo ukuze uqonde imigaqo-nkqubo yethu kunye nezinto esizenzayo malunga neNkcukacha zakho kunye nendlela esiza kuyiphatha ngayo. Ukuba awuvumelani nemigaqo-nkqubo kunye nezenzo zethu, musa ukusebenzisa iSiza. Ngokusebenzisa iSiza, uyavuma lo Mgaqo-nkqubo. Le Polisi inokutshintsha amaxesha ngamaxesha. Ukuqhubeka kokusebenzisa iSiza emva kokwenza iinguqu kuthathwa njengokukwamkela olo tshintsho, ke nceda ujonge umgaqo-nkqubo rhoqo ngamaxesha uhlaziyo.
UTSHINTSHO LWAMAZWE NGAMAZWE
Indawo yethu ibanjelwe eUnited States. Oku kuthetha ukuba uLwazi esiluqokelelayo luya kwenziwa kuthi e-United States, ilizwe elinemigangatho esezantsi yokukhusela idatha yobuqu kune-European Union. Nangona kunjalo, njengoko sinikezela indawo yethu kunye neenkonzo kubahlali kwi-European Union, iastroshopee ke ikwaxhomekeke kwimithetho yaseYurophu yokukhusela idatha, ngakumbi i-EU General Data Protection Regulation (i-GDPR).
Iastroshopee ikwinkqubo yokuchonga ummeli we-EU kwaye iya kukwazisa ngohlobo oluhlaziyiweyo lwalo Mgaqo-nkqubo wakuba umeli we-EU etyunjiwe.
Sisebenzisa izixhobo ezifanayo neziqendu zemvumelwano ngokomgangatho ngokweGDPR xa uhambisa<
Ulwazi lwakho ngaphandle kwe-European Union okanye kubantu besithathu sinokunciphisa ukubakho kweSiza okanye nayiphi na inkonzo okanye imveliso echazwe kwiSiza kuye nawuphina umntu okanye indawo yejografi nangaliphi na ixesha.
ABANTWANA Bangaphantsi kweminyaka eli-16
Indawo ayenzelwanga abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-16 ubudala, kwaye asazi ukuba siqokelela ulwazi oluvela kubantwana abangaphantsi kweminyaka eli-16. Ukuba sifunda ukuba siqokelele okanye safumana ulwazi lomntu siqu kumntwana ongaphantsi kweminyaka eli-16 ngaphandle kokuqinisekiswa kwemvume yomzali, siza kucima olo lwazi. Ukuba uyakholelwa ukuba singanalo naluphi na ulwazi malunga okanye malunga nomntwana ongaphantsi kwe-16, nceda unxibelelane nathi apha imfihlo@astroshopee.org
Singaqokelela kwaye sidibanise iintlobo ezahlukeneyo zolwazi kunye, kwaye ngokudibeneyo sibhekisa kulo lonke olu lwazi kule Mgaqo-nkqubo wabucala njenge 'Lwazi'. Apha ngezantsi luhlobo lolwazi esinokuluqokelela:
Iinkcukacha osinike zona. Singaqokelela ulwazi osinike lona, ​​njenge:
xa ubhalisa okanye usebenzisa iSiza, okanye ubhalisa kuyo nayiphi na inkonzo kwiSayithi, sinokukucela ukuba unikezele ngolwazi lomntu onokuchongwa ngalo, njengegama, idilesi yeposi, idilesi ye-imeyile, inombolo yomnxeba, okanye nayiphi na ezinye iinkcukacha zonxibelelwano.
Singakucela ukuba ubonelele ngolwazi lwakho xa ungena kumncintiswano okanye i-sweepstakes exhaswe sithi okanye uphendule kuvavanyo esinokuthi siluthumele kwaye sicele ukugcwalisa kwiSiza.
xa unxibelelana nathi ukuxela ingxaki ngeSiza, okanye wenze nayiphi na imibuzo ngokubanzi. Singagcina iirekhodi kunye neekopi zembalelwano yakho (kubandakanya iidilesi ze-imeyile, iinombolo zefowuni, kunye nolunye ulwazi lomntu osinike lona).
Ulwazi lobugcisa, ukusetyenziswa kunye nohlalutyo.
Sinokuqokelela ulwazi oluthile lobuchwephesha kunye nokusetyenziswa xa usebenzisa indawo yethu, enje ngohlobo lwesixhobo, isikhangeli, kunye nenkqubo oyisebenzisayo, isazisi esikhethekileyo sedivayisi, idilesi ye-IP, isixhobo kunye noseto lwebrawuza, iphepha lewebhu olindwendwelayo, kubandakanya ulwazi malunga indlela onxibelelana ngayo neSayithi lethu kunye neqela lethu lesithathu kunye nolwazi olusivumela ukuba siqaphele kwaye sidibanise umsebenzi wakho kwizixhobo nakwiSayithi. Singasazi isixhobo sakho ukuba sikunike amava abhalwe wena kunye nentengiso kwizixhobo ozisebenzisayo. Apho kufanelekileyo siya kuqokelela kuphela olo lwazi ngemvume yakho yangaphambili. Nceda ubone uKhetho lwakho kunye neMigaqo-nkqubo yethu yeeKuki ngolwazi oluthe kratya.
Unokwazi ukufikelela kumanqaku eSayithi ngokuhlala noluntu lwesithathu, iiforamu, kunye neendawo zosasazo zasekuhlaleni, iinkonzo, ii-plug-ins, kunye nokusetyenziswa (iiSayithi zeMidiya yezeNtlalontle). Useto lwakho lwangasese kwiiSayithi zeMidiya yokuSasaza, kunye nemigaqo-nkqubo yabo yabucala, iya kugqiba iinkcukacha zakho kunye nolunye ulwazi olunokuqokelelwa kwaye lusetyenziswe zezi Sayithi zeMithombo yeendaba.
Sinokufikelela kuLwazi malunga nendawo okuyo, njengelizwe lakho, xa uyinika okanye usebenzisa ulwazi ngesixhobo (njengedilesi ye-IP), okanye indawo ekuyo isixhobo sakho xa ungena kwiSiza ngesixhobo sakho esiphathwayo. Apho kufanelekileyo, siya kuqokelela kuphela olo lwazi ngemvume yakho yangaphambili.
Sisiphi isiseko esisemthethweni esinaso sokuqhubekeka idatha yakho yobuqu?
Sisebenza kuphela idatha yakho yobuqu ngeenjongo ezisemthethweni. Ukusetyenziswa kwedatha yakho yobuqu kuya kugwetyelwa ngokwesiseko somthetho omnye okanye nangaphezulu 'kweendawo zokuqhubekeka' ezibonelelwe kuMmiselo woKhuseleko lweDatha ngokuBanzi (i-GDPR).
Itheyibhile engezantsi iqulethe inkcazo yobume beendlela ezahlukeneyo zokuqhubekeka komthetho ezikhoyo phantsi kwe-GDPR ethembele kuyo iastroshopee xa iqokelela ulwazi:
Ukusebenza kwekhontrakthi: Apho sifuna khona idatha yakho yobuqu ukuze singene kwisivumelwano nawe kwaye sikunike iinkonzo zethu.
Umdla osemthethweni: Apho sisebenzisa idatha yakho yobuqu ukufezekisa umdla osemthethweni kwaye izizathu zethu zokuyisebenzisa zigqwesa naluphi na ucalucalulo kumalungelo akho okhuseleko lwedatha.
Amabango asemthethweni: apho idatha yakho yobuqu iyimfuneko kuthi ukukhusela, ukutshutshisa okanye ukwenza ibango ngokuchasene nathi, thina okanye umntu wesithathu.
Izibophelelo zethu namalungelo ethu asemthethweni: Apho kufuneka sisebenzise idatha yakho yobuqu phantsi kwesibophelelo esisemthethweni ngaphakathi kwe-EU.
Imvume: Apho uvumayo ukuba siyisebenzisa idatha yakho yobuqu (kwimeko apho uya kuthi unikwe ifom yemvume ngokunxulumene nalo naluphi na usetyenziso olunjalo kwaye ungayirhoxisa imvume yakho nangaliphi na ixesha ngokunika isaziso imfihlo@astroshopee.org
Ukubonelela ngeemveliso kunye neenkonzo zethu:
Sisebenzisa uLwazi esiluqokelela malunga nawe ukufezekisa izicelo zakho zeemveliso, usetyenziso, iinkonzo, kunye nomxholo kunye nokubonelela, ukuphuhlisa, ukugcina, ukwenza ubuqu, ukukhusela, kunye nokuphucula amava akho kunye neminikelo yethu. Umzekelo, sisebenzisa uLwazi oluqokelelwe kwiindawo zethu (i) ukubonelela ngomxholo, iimveliso, iinkonzo kunye nohlaziyo (ii) ukubonelela ngezaziso malunga neakhawunti yakho okanye imirhumo, (iii) ukwenza ukuba ufunde kwaye uthumele izimvo, okanye (iv) wenze ukuba ungenele unyuselo, ukhuphiswano, kunye ne-sweepstakes.
Ukuqhubekeka kwamabala phantsi kwe-GDPR:
Ukufezekisa uxanduva lwesivumelwano kunye nolwasemthethweni; nangemvume yakho (apho ifunekayo)
Inzala esemthethweni (apho kufanelekileyo)
Ukuphucula nokuphuhlisa iimveliso ezintsha kunye neenkonzo; ukwandisa ukusebenza; ukukhusela kurhwaphilizo; ukugcina iinkcukacha zakho zangaphambili zeemveliso kunye / okanye iinkonzo onokuzithenga okanye onomdla kuzo, ukuze ukucebise ngezinye iimveliso ezinokubangela umdla.
Sisebenzisa uLwazi esiqokelela kulo (i) ukukuthumelela ulwazi malunga nokunyuselwa, ukunikezelwa, kunye neempawu zethu, (ii) ukubonelela ngentengiso esekwe kwimidla yakho kunye nendawo okuyo, (iii) ukuzibandakanya nezinto ezisebenzisanayo, imisebenzi, kunye neeSayithi zeMidiya yezeNtlalontle ukubonelela nawe, okanye uvumele iiSayithi zeMidiya yezeNtlalontle ukuba ikunike iintengiso ezisekwe kwiminqweno yakho, (iv) ngamanye amaxesha sisebenzisa olu Lwazi ukunikezela, ukuthengisa, okanye ukubhengeza iimveliso, iinkqubo, okanye iinkonzo kuwe ezivela kuthi nakwimibutho yethu, ishishini amaqabane, kunye namaqela esithathu akhethiweyo, okanye (v) kuthi kunye namaqabane ethu, amaqabane oshishino, kwaye ukhethe abantu besithathu ekujolise kubo, ukunikezela, okanye ukubhengeza iimveliso, iinkqubo, okanye iinkonzo ezinokubangela umdla kuwe.
Umdla osemthethweni kunye nemvume yakho (apho ifunekayo)
Ukukhuthaza iimveliso zethu kunye neenkonzo kubasebenzisi bethu, ukubonelela ngezibonelelo, amathuba kunye neenkonzo ezinokubangela umdla kuwe.
Sisebenzisa ulwazi malunga nawe ukunxibelelana nawe, (i) ukukwazisa xa uphumelela enye yemincintiswano yethu okanye i-sweepstakes okanye xa sisenza utshintsho kwimigaqo-nkqubo okanye kwimigaqo yethu, (ii) ukuphendula imibuzo yakho, okanye (iii) ukunxibelelana nawe malunga neakhawunti yakho.
Ukubonelela kunye / okanye ukunxibelelana ngolwazi olubalulekileyo; ukwandisa ukusebenza; ukulawula, ukuphucula, okanye ukuphuhlisa iinkonzo ezintsha kunye neemveliso; amanani aqokelelweyo.
Ngeenjongo zokhuseleko kunye nokuhlalutya kunye nokuphucula ngokuqhubekayo iiSayithi kunye neenkonzo zethu.
Sisebenzisa ulwazi lobuchwephesha kunye nokusetyenziswa ukuphucula uyilo, ukusebenza kunye nomxholo kunye nokwenza ukuba sikwazi ukwenza amava akho abe ngumxholo wethu kunye neminikelo. Sisebenzisa olu Lwazi (i) ukubonelela, ukuphuhlisa, ukugcina, ukwenza ubuqu, ukukhusela kunye nokuphucula iimveliso zethu, usetyenziso kunye neenkonzo, kunye nokuqhuba ishishini lethu, (ii) ukwenza uhlalutyo, kubandakanya ukuhlalutya kunye nokwenza ingxelo ngokusetyenziswa kunye nokusebenza , (iii) ukukhusela ngokuchasene, nokuchonga, nokuthintela ubuqhetseba kunye nezinye izinto ezingekho mthethweni, (iv) ukwenza idatha edibeneyo malunga namaqela okanye iindidi zabasebenzisi bethu, kunye (iv) nokuthintela ubuqhetseba.
Ukufezekisa uxanduva lwesivumelwano kunye nolwasemthethweni, umdla osemthethweni, kunye nemvume yakho (apho kufuneka khona)
Ukuphonononga ulwazi kutyelelo lwakho kunye nokunxibelelana neeSayithi ukuze ube nokuqonda okungcono ngokusetyenziswa kwazo ukuze siphuhlise amava anomdla ngakumbi kubasebenzisi.
Ukuthengisa kunye nenethiwekhi yomntu wesithathu.
Sisebenzisa iiNkcukacha zakho xa unxibelelana neempawu zomntu wesithathu ukunxibelelana nawe ngentengiso kwaye uzibandakanya nawe kwinethiwekhi yomntu wesithathu. Ungafunda ngakumbi ukuba zisebenza njani ezi mpawu, idatha yeprofayile esiyifumana ngawe, kwaye ufumane indlela yokuphuma ngokujonga izaziso zabucala zenethiwekhi zomntu wesithathu ezifanelekileyo.
Inzala esemthethweni, kunye nemvume yakho njengoko ifunyenwe sithi okanye nayiphi na inethiwekhi yomntu wesithathu (apho kufuneka khona)
Ukuphonononga ulwazi kutyelelo lwakho kunye nokunxibelelana neeSayithi ukuze ube nokuqonda okungcono ngokusetyenziswa kwazo ukuze siphuhlise amava anomdla ngakumbi, sinike izibonelelo ezilungiselelwe, amathuba kunye neenkonzo ezinokubangela umdla kuwe.
Ukuthobela kunye nokutshintsha ubume beshishini lethu.
Sisebenzisa ulwazi esiluqokelelayo ukukhangela, ukuphanda, kunye nokuthintela imisebenzi eyaphula imigaqo yethu yokusetyenziswa, enokubakho ngobuqhetseba, yaphule amalungelo obunini, okanye eminye imithetho, ukuthobela iimfuno zomthetho, nokukhusela amalungelo ethu namalungelo kunye nokhuseleko lwabasebenzisi bethu. nabanye. Sinokubonelela ngedatha yakho yobuqu nakowuphi na umntu onokufumana okanye otyale imali nakweyiphi na indawo kwishishini likaastroshopee ngeenjongo zokufumana okanye ukutyala imali.
Ukufezekisa uxanduva lwesivumelwano kunye nomthetho
Ukukhusela umdla wethu kwishishini, ipropathi kunye namanye amalungelo, ukukhusela imfihlo, ukhuseleko kunye namanye amalungelo oluntu.
Iastroshopee ilawula uLwazi lwakho kwaye ithathwa njengesilawuli sedatha njengoko kuchaziwe kwi-GDPR. Singabelana kwaye sichaze ulwazi oluhlanganisiweyo noluchongiweyo malunga nabasebenzisi bethu ngaphandle kwesithintelo.
Apho sidibana neeprosesa zedatha ezisebenzisa idatha yobuqu engaphandle kwe-EEA, siya kuqinisekisa ukuba kuyakubakho inqanaba elifanelekileyo lokhuseleko. Ukongeza, siya kumilisela ukhuseleko olusemthethweni olulawula olo tshintsho, njengezixhobo ezifanayo nemodeli yegatya lesivumelwano, imvume yabantu, okanye ezinye izizathu zomthetho ezivunyelwe ziimfuno zomthetho ezifanelekileyo.
Amazwe athile angaphandle kwe-EEA avunyelwe yiKhomishini yaseYurophu njengonikezela ngokhuseleko olufanayo njengemithetho yokukhusela idatha ye-EEA. Imithetho yokukhuselwa kwedatha ye-EU ivumela uastroshopee ukuba adlulise ngokukhululekileyo idatha yobuqu kula mazwe. Nceda unxibelelane nathi ku imfihlo@astroshopee.org ukuba ungathanda ukubona ikopi yokhuseleko esisebenzisa ngokunxulumene nokuthumela idatha yakho yobuqu.
Ababoneleli ngeenkonzo . Senze ezi ndidi zilandelayo zeeprosesa zedatha eziqhubekekisa idatha yobuqu endaweni yethu: iikontraki zethu, ababoneleli ngeenkonzo, ababoneleli bokuqukethwe, kunye nabanye abantu besithathu esisebenzisayo ukuxhasa ishishini lethu banokufikelela kulwazi ukunceda ukwenza iinkonzo abazenzayo. eyethu, kubandakanya: ukudala, ukugcina, ukusingatha, kunye nokuhambisa iiSayithi zethu, iimveliso kunye neenkonzo; ukuthengisa (umzekelo ukukunika iintengiso ezijolise kuzo ngemvume efanelekileyo); ukuphatha intlawulo, i-imeyile kunye nokuzaliseka komyalelo; ukulawula imincintiswano; ukuqhuba uphando kunye nohlalutyo; kunye nenkonzo yabathengi.
Ukuthengisa ngokudibeneyo kunye nabantu besithathu. Singabhengeza uLwazi kumahlakani, amaqabane oshishino, kunye nabantu besithathu (umzekelo, abathengisi, abathengisi, iiarhente zentengiso, uthungelwano lwentengiso kunye namaqonga, imibutho yophando, kunye nezinye iinkampani) ezizenzo zazo zingagutyungelwanga Ngulo Mgaqo-nkqubo wabucala kwaye ziya kusebenza njengomlawuli. La maqela anokubonelela, anikezele, aphucule, athengise, kwaye kungenjalo anxibelelane nawe malunga neemveliso zabo kunye neenkonzo. Siza kuhlala sicela imvume yakho yangaphambili ngaphambi kwako nakuphi na ukubhengezwa okunjalo.
Abaxhasi kunye nokunyuselwa kunye . Ngamanye amaxesha sinika umxholo okanye iinkqubo (umzekelo, ukhuphiswano, i-sweepstakes, ukukhushulwa, okanye ukudityaniswa kweSayithi yezeMidiya yezeNtlalontle) ezixhaswe okanye zidityaniswe ngabantu besithathu. Ngenxa yobu budlelwane, abantu besithathu baqokelela okanye bafumane ulwazi kuwe xa uthatha inxaxheba kulo msebenzi. Asinakulawula ukusetyenziswa kwale nkampani yesithathu kolu Lwazi. Siyakukhuthaza ukuba ujonge ukubhengezwa ngasese kwalo naliphi na iqela lesithathu ukuze ufunde malunga nokwenza kwabo idatha ngaphambi kokuba uthathe inxaxheba kulo msebenzi.
IiSayithi eziDibeneyo . Ezinye iiSayithi ziqulathe amakhonkco kwezinye iisayithi, kubandakanya iiSayithi zeMidiya yezeNtlalontle. Singadibanisa iinkqubo zesicelo seendaba zosasazo okanye iiplagi ('iiPlag-ins') ezivela kwiinethiwekhi zentlalo, kubandakanya i-Facebook, i-Twitter, i-Instagram, iPinterest kunye nezinye, kwiiSayithi zethu. Ii-plug-ins zingadlulisela ulwazi malunga nawe kwiPlatform yeqonga ngaphandle kwentshukumo yakho. Olu lwazi lunokubandakanya inombolo yakho yesazisi somsebenzisi weqonga, yeyiphi iwebhusayithi ekuyo, kunye nokunye. Ukusebenzisana ne-Plug-in kuya kugqithisa ulwazi ngqo kwi-Plug-in yenethiwekhi yentlalo kwaye olo lwazi lunokubonakala ngabanye kwiqonga. Ii-plug-ins zilawulwa ngumgaqo-nkqubo wabucala weqonga, hayi ngoMgaqo-nkqubo wethu.
Iinjongo zoMthetho noNyanzeliso loMthetho . Singabhengeza uLwazi ngokuphendula kwinkqubo yezomthetho, umzekelo ekuphenduleni kumyalelo wenkundla okanye kwisupina, okanye ekuphenduleni kwisicelo se-arhente yokunyanzeliswa komthetho. Sinokuphinda sixele olo lwazi kubantu besithathu: (i) ngeenjongo zokukhusela ubuqhetseba kunye nokunciphisa umngcipheko kumatyala, (ii) apho sikholelwa ukuba kufanelekile ukuphanda, ukuthintela, okanye ukuthatha amanyathelo ngokubhekisele kwimisebenzi engekho mthethweni, (iii) ukunyanzelisa amalungelo ethu avela kuzo naziphi na iikhontrakthi ezenziwe phakathi kwakho nathi, kubandakanya neMigaqo yokuSebenzisa, le Migaqo-nkqubo, kunye nokuhlawulwa kunye nokuqokelelwa, (iv) ukuba sikholelwa ukuba ukuxelwa kunyanzelekile okanye kufanelekile ukukhusela amalungelo ethu, ipropathi, okanye ukhuseleko okanye yabathengi bethu, abasebenzisi, iikontraki okanye abanye, (v) njengoko kufunwa njalo ngumthetho.
loluphi uphawu lwe-zodiac ngo-Okthobha 1
Unxibelelwano lweNtengiso kunye noKwabelana namaQela esiThathu. Ukuba ubhalisile ukufumana iincwadana zeendaba kunye / okanye ulwazi lokuthengisa, unethuba lokukhetha ukhetho lwakho ngokubhekisele ekufumaneni unxibelelwano lokuthengisa oluvela kuthi, kunye nokwabelana kwethu ngolwazi kunye namaqabane ngeenjongo zokuthengisa ngokuthe ngqo.
Ungahlaziya ukhetho lwakho ngokubhekisele ekufumaneni unxibelelwano oluthile lokuthengisa kuthi, kunye nokwabelana kwethu ngolwazi lomntu kunye nomntu wesithathu. Unokwenza njalo ngokuqhagamshelana nathi apha imfihlo@astroshopee.org . Unokukhetha ukufumana unxibelelwano lokuthengisa nge-imeyile, ngokulandela imiyalelo 'yokungabhalisi' enikezelwe kuyo yonke imeyile oyifumanayo kuthi. Unokuhlengahlengisa izaziso zakho zesixhobo kwifowuni yakho okanye kuseto lweapp.
Ukhetho lweNtengiso . Sinokusebenza kunye nomntu wesithathu ukubonisa iintengiso, kunye nokuzibandakanya ekuqokeleleni idatha, ekunikeni ingxelo, kuhlalutyo lwesiza, ukuhanjiswa kweentengiso kunye nemilinganiselo yokuphendula kwiiSayithi zethu nakwiiwebhusayithi zomntu wesithathu kunye nokusetyenziswa kwexesha. La maqela esithathu anokusebenzisa ii-cookies, ii-web beacons, iipikseli, kunye nobunye ubuchwepheshe obufanayo ukwenza lo msebenzi. Banokufumana ulwazi malunga newebhusayithi ozindwendwelayo, usetyenziso olisebenzisayo, kunye nolunye ulwazi kuzo zonke izikhangeli zakho kunye nezixhobo ukuze ubonise intengiso enokuthi ilungiselelwe umdla wakho ngaphakathi nangaphandle kweSayithi zethu nakwezinye iiplatifomu. Olu hlobo lwentengiso lwaziwa njengentengiso esekwe kumdla, kwaye inokusetyenziselwa ukudibanisa iibrawuza ezahlukeneyo kunye nezixhobo kunye ngenjongo yentengiso esekwe kumdla kunye nohlalutyo.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nentengiso esekwe kumdla kwidesktop yakho okanye kwisiphequluli sefowuni, kunye nokukwazi kwakho ukuphuma kolu hlobo lwentengiso ngabantu besithathu, nceda undwendwele Ukhetho lwakho kwi-Intanethi kunye / okanye i-EDAA Iphulo lokuZilawula lokuThengisa ngokuziphatha kwi-Intanethi . Nceda uqaphele ukuba naluphi na ukhetho lokuphuma onokulusebenzisa kwezi nkqubo luya kusebenza kuphela kwintengiso esekwe kumdla ngabantu besithathu obakhethayo. Usenokuqhubeka nokufumana intengiso, kodwa loo ntengiso isenokungahambelani kangako nemidla yakho.
Unokukhetha ngakumbi ngokuxhomekeke kwinkqubo yakho yokusebenza okanye isixhobo esiphathwayo. Uninzi lwezixhobo ezisebenzayo zezixhobo zibonelela ngemiyalelo yazo malunga nendlela yokunciphisa okanye yokuvimba ukuhanjiswa kwentengiso yangaphakathi nohlelo. Ungalujonga kwakhona useto lwabucala kule nkqubo yokusebenza ukuze ufunde ngokunciphisa intengiso ye-in-app eyenzelwe yona. Unokukhubaza ulwazi oluchanekileyo lwendawo kwisixhobo esiphathwayo kusetyenziswa useto lwesixhobo sakho esiphathwayo kwaye ukhethe ukunciphisa loo ingqokelela.
UMGAQO-NKQUBO WOKUPHEPHA WABASEBENZISI BEEU
Iicookies kunye nobunye ubuChwepheshe . Thina, kunye nabo sidibana nabo, ababoneleli beenkonzo zomntu wesithathu, kunye namaqabane ethu eshishini sinokuthumela 'ii-cookies' kwikhompyuter yakho okanye sisebenzise itekhnoloji efanayo ukuphucula amava akho kwi-Intanethi kwiiSayithi zethu nangentengiso nakumajelo eendaba kwi-Intanethi nakwiapps.
Iicookies ziifayile zetekisi ezincinci ezinolwazi olukhutshelwa kwifowuni yakho xa undwendwela iwebhusayithi, kubandakanya neeSayithi zethu. Iicookies zithunyelwa emva kwi-domain yewebhu kutyelelo lwakho olulandelayo kuloo ndawo. Uninzi lwamaphepha ewebhu anezinto ezivela kwimimandla emininzi yewebhu ke xa undwendwela iwebhusayithi, isikhangeli sakho sinokufumana ikuki kwimithombo eliqela. Iicookies ziluncedo kuba zivumela iwebhusayithi ukuba ibone isixhobo somsebenzisi. Iicookies zikuvumela ukuba uzulazule kwiwebhusayithi ngokufanelekileyo, khumbula izinto ozikhethayo kwaye uphucule ngokubanzi amava omsebenzisi. Zingasetyenziselwa ukulungelelanisa intengiso kwimidla yakho ngokulandela umkhangeli wakho wokukhangela kwiwebhusayithi. Iicokies zeseshoni ziyacinywa ngokuzenzekelayo xa uvala isikhangeli sakho kwaye ii-cookies ezingapheliyo zihlala kwisixhobo sakho emva kokuba isikhangeli sivaliwe (umz.ukukhumbula izinto ozikhethayo xa ubuyela kwiiSayithi).
Sinokusebenzisa iipikseli okanye 'iibhikhoni zewebhu' ezithi zibeke iliso ekusebenziseni iiSayithi zethu. Iibhikhoni zewebhu ziifayile ezincinci ze-elektroniki ezidityaniswe kwiiSayithi okanye unxibelelwano lwethu (umzekelo, ii-imeyile) esivumela thina, umzekelo, ukubala abasebenzisi abatyelele loo maphepha okanye bavule i-imeyile okanye ezinye iinkcukacha ezinxulumene noko. Sinokudibanisa 'izixhobo zophuhliso lwesoftware' ('SDKs') kwizicelo zethu zokwenza imisebenzi efanayo njengecookie kunye neebhikhoni zewebhu. Umzekelo, ii-SDKs zinokuqokelela ulwazi lobuchwephesha kunye nokusetyenziswa okunje ngeefowuni zeselfowuni kunye nonxibelelwano lwakho neSiza kunye nezinye ii -apps ezihambayo.
Sinokusebenzisa ikuki kunye nezinye iitekhnoloji (i) ukubonelela, ukuphuhlisa, ukugcina, ukwenza ubuqu, ukukhusela kunye nokuphucula iiSayithi zethu, iimveliso, iinkqubo kunye neenkonzo kunye nokuqhuba ishishini lethu, (ii) ukwenza uhlalutyo, kubandakanya ukuhlalutya kunye ukunika ingxelo ngokusetyenziswa kunye nokusebenza kweeSayithi zethu kunye nezinto zokuthengisa, (iii) ukukhusela, ukuchonga, nokuthintela ubuqhetseba kunye nezinye izinto ezingekho mthethweni, (iv) ukwenza idatha edibeneyo malunga namaqela okanye iindidi zabasebenzisi bethu, (v) ukungqamanisa abasebenzisi kwizixhobo zonke, abaxhasi, amaqabane oshishino, kwaye ukhethe umntu wesithathu, kwaye (vi) thina kunye nabanxulumene nathi, amaqabane oshishino, kwaye ukhethe abantu besithathu ekujolise kubo, ukunikezela, okanye ukuthengisa, iimveliso, iinkqubo, okanye iinkonzo. Iicookies kunye nezinye iitekhnoloji zikwalungiselela kwaye zilinganise ukusebenza kwentengiso eboniswe okanye ehanjiswe ngathi okanye ngathi okanye ezinye iinethiwekhi okanye iisayithi.
Okwangoku asiphenduli ku Musa ukuKhangela imiqondiso kuba umgangatho wobugcisa ofanayo awukenziwa. Siyaqhubeka nokujonga ubuchwephesha obutsha kwaye sinokwamkela umgangatho xa sele yenziwe enye.
Ukulawula iiKuki kunye nezinye iiTekhnoloji.
Ezi cookies zibalulekile ukuze ukwazi ukwenza ukuba ujikeleze iiSayithi kwaye usebenzise izixhobo zayo. Ngaphandle kwezi kuki, iinkonzo ozicelileyo (njengokuhamba phakathi kwamaphepha) azinakubonelelwa. Olu luhlu lulandelayo lubeka eminye yemizekelo yezi cookies:
Sisebenzisa iikuki zokuhlalutya ukuhlalutya indlela abatyeleli bethu abazisebenzisa ngayo iiSayithi kunye nokujonga ukusebenza kwabo. Oku kusivumela ukuba sinikezele ngamava akumgangatho ophezulu ngokwenza ngokwezifiso umnikelo wethu kunye nokuchonga ngokukhawuleza kunye nokulungisa nayiphi na imiba evelayo. Umzekelo, sinokusebenzisa ii-cookies ukuze sigcine ukuba ngawaphi amaphepha athandwa kakhulu, yeyiphi indlela yokudibanisa phakathi kwamaphepha asebenza kakhulu, kunye nokufumanisa ukuba kutheni amanye amaphepha efumana imiyalezo yemposiso. Sinokusebenzisa ezi kuki ukuqaqambisa amanqaku okanye iinkonzo zeSayithi esicinga ukuba ziya kuba nomdla kuwe ngokusekwe ekusebenziseni kwakho iiSayithi. Ulwazi oluqokelelwe zezi khukhi aluhambelani nenkcukacha zakho zobuqu kuthi okanye ziikontraki zethu kwaye zisetyenziswa kuphela kumdibaniso kunye nefom echongiweyo. Olu luhlu lulandelayo lubeka eminye yemizekelo yezi cookies:
Cofa apha malunga nomgaqo-nkqubo wabucala kuGoogle ngokubhekisele kuGoogle Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Unokukhetha ukuphuma ekulandeleni ngeGoogle Analytics ngokundwendwela: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB .
Iikuki zentengiso (okanye iicookies ezijolise kuzo) ziqokelela ulwazi malunga nemikhwa yokukhangela enxulumene nesixhobo sakho kwaye zisetyenziselwa ukwenza intengiso ibenomdla ngakumbi kuwe nakwimidla yakho. Ezi kuki zikwalinganisa ukusebenza kwemikhankaso yentengiso kwaye zilandelele ukuba ngaba iintengiso zibonisiwe ngokufanelekileyo. Unokufikelela kumphathi weMvume ye-EU emazantsi eSayithi ukuba unqwenela ukutshintsha ukuthanda kwakho. Olu luhlu lulandelayo lubeka eminye yemizekelo yezi cookies:
Umthombo weKuki: Cofa kabini:
Cofa apha ukuze ufumane umgaqo-nkqubo wabucala kuGoogle ngokubhekisele kwi-DoubleClick https://policies.google.com/privacy?hl=en
Isinese zodiac uphawu ngo-1964
Ukuba ungathanda ukuphuma, unokwenza njalo kwi https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
IiNtengiso zeeKuki kwiiNdawo eziDibeneyo
Iikuki zentengiso zinokusetyenziswa ziindawo zosasazo zasekuhlaleni ezinxibelelene neSayithi yethu, ezinje ngamaqhosha 'okwabelana' okanye amaqhosha alalelweyo / abadlali bevidiyo, ukongeza ekunikezeleni ngokusebenza okuceliweyo. Iindawo zosasazo zasekuhlaleni zibonelela ngezi nkonzo ngenjongo yokubona ukuba wena (okanye ngokuchanekileyo isixhobo sakho) undwendwele iiwebhusayithi ezithile. Ezo ndawo zosasazo zasekuhlaleni zibeka iicookies zentengiso zombini xa undwendwela iiSayithi zethu naxa usebenzisa iinkonzo zabo kwaye uhamba kude neeSayithi zethu. Iinkqubo zecookie zezinye zezi ndawo zosasazo zasekuhlaleni zibekwe apha ngezantsi:
Umgaqo-nkqubo wecookie kaFacebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Umgaqo-nkqubo weKuki we-Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
Umgaqo-nkqubo weKuki we-Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Umgaqo-nkqubo wecookie wePinterest: https://policy.pinterest.com/en/cookies
Umgaqo-nkqubo wecookie ka-YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies
Umgaqo-nkqubo weCookCloud Cookie: https://soundcloud.com/pages/cookies
Umgaqo-nkqubo weGoogle Plus Cookie: https://policies.google.com/technologies/cookies
AMALUNGELO WAKHO OKUFIKELELA, OKULUNGILEYO NOKUSUSA INGCACISO YAKHO
Unelungelo lokusicela ikopi yeNgcaciso yakho, ukuyilungisa, ukuyicima okanye ukuthintela ukuqhubekeka kwayo, kunye nokufumana uLwazi osinike lona. Usenokusicela ukuba sidlulisele ulwazi oluthile osinike lona kumntu wesithathu ngombane.
Unelungelo lokungavumi ukwenziwa kwengcaciso yobuqu ngokusekelwe kumdla wethu osemthethweni. Apho sicele imvume yakho yokuqhubekeka noLwazi, unelungelo lokurhoxisa le mvume nangaliphi na ixesha.
Ukuba uneengxaki ezingasonjululwanga, unelungelo lokukhalaza kwigunya lokhuseleko lwedatha ye-EU apho uhlala khona, usebenza okanye apho ukholelwa ukuba ulwaphulo-mthetho lwenzekile. Nceda uqaphele ukuba iimeko ezithile ziyasetyenziswa ekusetyenzisweni kwala malungelo kwaye ke ngekhe ukwazi ukusebenzisa onke la malungelo kuzo zonke iimeko.
La malungelo aphantsi kokuxolelwa okuthile ukukhusela iimfuno zoluntu (umz. Ukuthintela okanye ukufumanisa ulwaphulo-mthetho) kunye nomdla wethu (umz. Ukugcinwa kwelungelo elisemthethweni). Ngamanye amaxesha, oku kunokuthetha ukuba siyakwazi ukugcina ulwazi lwakho nokuba uyirhoxisile imvume yakho. Siza kuphendula kwizicelo ezininzi kwinyanga enye.
Ungarhoxa kuyo nayiphi na iincwadana zeendaba okanye iiimeyile zentengiso ezahlukeneyo nangaliphi na ixesha ngokunqakraza kwikhonkco elithi 'ungazibhalisi' ezinikiweyo kunxibelelwano olunje. Awunakho ukuphuma kunxibelelwano olunxulumene neSiza, olufana nokuqinisekiswa kweakhawunti, iziqinisekiso zokuthenga kunye nemiyalezo yolawulo, ukuba nje ubhalisile kwiiSayithi.
Amaxesha ethu okugcina idatha yobuqu isekwe kwiimfuno zeshishini kunye neemfuno zomthetho. Sigcina idatha yobuqu okokoko kufanelekileyo ukulungiselela iinjongo zokuqhubekekiswa kwedatha yobuqu, kunye nayo nayiphi na into eyamkelekileyo, enxulumene noko. Umzekelo, sigcina iinkcukacha ezithile zentengiselwano kunye nembalelwano de ixesha elimiselweyo lamabango avela kwintengiselwano liphelelwe, okanye ukuthobela iimfuno zolawulo ngokubhekisele kugcino lwedatha.
Similisele amanyathelo afanelekileyo obuchwephesha nawombutho ukukhusela ukuqhubekeka kwedatha yobuqu. Ezi zikhuselo ziya kwahluka ngokuxhomekeka kubuntununtunu, ifomathi, indawo, isixa, ukuhanjiswa kunye nokugcinwa kwedatha yobuqu, kwaye kubandakanya amanyathelo enzelwe ukugcina idatha yobuqu ikhuselwe kufikelelo olungagunyaziswanga.
Sikuthintela ukufikelela kwidatha yobuqu kubasebenzi nakumaqela esithathu afuna ukufikelela kolo lwazi ngeenjongo ezifanelekileyo, ezifanelekileyo zeshishini.
Bonke abasebenzi bethu, iikontraki kunye nabantu besithathu abaya kuba nakho ukufikelela kwidatha yobuqu kwimiyalelo yethu baya kubotshelelwa kwimfihlo kwaye sisebenzisa ukufikelela kufikeleleko ukunciphisa ukufikelela kubantu abafuna ukufikelela kolo hlobo ukuze benze uxanduva nemisebenzi yabo.
Sinemigaqo-nkqubo yokhuseleko yolwazi ekhoyo kwaye imigaqo-nkqubo yayo yokhuseleko kunye neenkqubo ziphicothwa rhoqo. Siluthathela phezulu kakhulu ukhuseleko lwezixhobo zethu ze-IT.
Nangona sithatha amanyathelo okhuseleko afanelekileyo ukukhusela iinkcukacha zakho, asinakuqinisekisa ngokhuseleko lweenkcukacha zakho. Nakuphi na ukuhanjiswa kolwazi lomntu buqu nge-Intanethi kunye namaqonga eselfowuni akhuselekanga ngokupheleleyo, kwaye ke, nakuphi na ukuhanjiswa kolwazi lomntu siqu kusemngciphekweni wakho. Asinaxanduva lokuthintela nasiphi na isetingi yabucala okanye amanyathelo okhuseleko esiwanikayo.
Ukhuseleko kunye nolwazi lwakho luxhomekeke kuwe. Apho sikunike khona (okanye apho ukhethe khona) iphasiwedi yokufikelela kwiindawo ezithile zeSayithi zethu, unoxanduva lokugcina le mfihlo iyimfihlo. Akufanele wabelane ngephasiwedi yakho kunye nabani na.
Singahlaziya iPolisi yethu amaxesha ngamaxesha. Siza kukwazisa malunga naluphi na utshintsho lwezinto ezibonakalayo kulo Mgaqo-nkqubo wabucala ngokubeka isaziso kwiiSayithi zethu. Siyakukhuthaza ukuba umane ujonga kwakhona kwaye uphonononge le Polisi ukuze wazi naluphi na utshintsho olwenziwe kutshanje.
Iinkxalabo Zabucala . Ukuba unenkxalabo okanye isikhalazo malunga nobumfihlo kwiiSayithi, nceda unxibelelane nathi eastroshopee Digital Media, LLC., Attn: Imicimbi yezomthetho, iZiko loyilo lwePacific, iRed Building West, i-750 N. San Vicente Blvd., 9thUmgangatho, eMpuma Hollywood, CA, 1312312, eU.SA okanye usithumelele i-imeyile kwi-email ngasese@astroshopee.org. Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukukuphendula ngexesha elifanelekileyo nangobungcali ukuze siphendule imibuzo yakho kwaye sisombulule iingxaki zakho.
© Iastroshopee Digital Media, LLC. Onke Amalungelo Agciniwe. Iastroshopee kunye neastroshopee.com ziimpawu zorhwebo ezibhalisiweyo zeastroshopee Digital Media, LLC
Ngomhla we-12 kuMatshi iintsuku zokuzalwa
Agasti 12 Imihla yokuzalwa
umqondiso weZodiac kaJuni 28
umfazi wase-aries kunye ne-aries yokuhambelana komfazi
yintoni indoda eyi-aries efuna ukuyiva
loluphi uphawu ngoJanuwari 11
i-virgo man leo ibhinqa ngesondo
neptune kwindlu yesi-7
Unyaka we-1969 we-zodiac yamaTshayina